Sabti, Dec 19, 2020-Madaxweyne Muuse Biixi oo qaabilay wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Malawi – LaacibOnline
Sabti, Dec 19, 2020-Madaxweyne Muuse Biixi oo qaabilay wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Malawi
Sabti, December, 19, 2020 (HOL) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu horkacayo Wasiirka Arrimaha Dibada Malawi Eisenhower Mkaka oo maanta gaaray magaalada Hargeysa.
Madaxweyne Biixi ayaa wafdiga uga mahadceliyay booqashada ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa, isaga oo dhinaca kale warbixin ka siiyay hormarada kala duwan ee Somaliland ay sameysay muddadii ay soo jirtayba.
Wasiirka Wasaarradda Arrimaha Dibada Malawi ayaa dhankiisa uga mahad celiyay madaxda iyo shacabka reer Somaliland soo dhaweynta ay u fidiyeen, isaga oo sheegay in ka dowlad ahaan ku faraxsan yihiin homarada kala duwan ee Somaliland ay ku talaabasatay.
Booqashada wafdigan uu horkacayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Malawi ayaa imaneysa xili dhawaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu kulan kula qaatay magaalada Nairobi madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay ka wada-hadaleen xoojinta xiriirka labada dhinac, iyaga oo ku heshiiyay qoddobo dhowr ah.
Balse Dowladda Soomaaliya oo arintaa ka carreysan ayaa durbadiiba ku dhawaaqaday in ay xiriirkii Diblomaasiyadeed u jirtay dowladda Kenya oo ay ku eedeysay in ay fara-galin ku heyso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Sidaa oo kale tallaabadan ay qaaday dowladda Malawi ayaa keeni karta sida ay dad badanni qabaan in Soomaaliya ka fiirsato xiriirka kala dhaxeeya Malawi, inkastoo wali wax war ah ka soo bixin Dowladda Federaalka Soomaaliya.
← Sabti, Dec 19, 2020-Cali Guudlaawe oo kordhiyay mudada uu soo magacaabayo Golaha Wasiirradda Hirshabeelle
Sabti, Dec 19, 2020-Dowladda federalka Soomaaliya iyo Galmudug oo kulan ka yeeshay sidii jawaab degdeg ah looga bixin lahaa weerarkii ismiidaaminta ee Gaalkacyo →
Isniin, Dec 28, 2020-Taabit Cabdi ” Beledweyne xal maangal ah ayeey dalbaneysaa ee xabad uma baahna
Talaado, Oct 27, 2020-Midowga Afrika iyo midowga Yurub oo xoojiyay in la ixtiraamo madax-bannaanida Soomaaliya
Talaado, Oct 6 , 2020-Madaxweyne Farmaajo oo soo gabagabeeyay socdaalkii uu ku tagay Eritrea
A landmine explosion in the Somali capital targeted a local district commissioner in the second bomb blast in Mogadishu city